Moya China Best Selling Ultrasonic Electric Mosquito Pest Reject for Home kunye Office umzi-mveliso kunye nabavelisi |Jinjiang
Eyona iThengisayo iUltrasonic Electric Mosquito Pest Reject yeKhaya kunye neOfisi
Imodeli yemveliso: 3033
Ukuphindaphinda: 20 ~ 65khz
Umsebenzi oyintloko: Le mveliso isebenzisa amagagasi e-ultrasonic ukuvuselela i-neurons yezinambuzane, kwaye umgaqo wokubangela ukuba izinambuzane zingakhululeki ufezekisa umphumo wokugxotha omiyane, iigundane, ama-cockroach, i-bed bugs, i-fleas kunye nezinye izinambuzane.Le mveliso ithatha iteknoloji yokuguqula i-ultrasonic, enokuthi ijolise kwiintlobo ezahlukeneyo zezinambuzane.Uguqulo oluzenzekelayo lwefrikhwensi yebhendi nganye ayidingi kutshintsha ngesandla iibhendi zamaza, kwaye inokukhupha izitshabalalisi ezahlukeneyo ngaxeshanye.Ukusebenzisa imowudi yokutshintsha isitshixo, inokuvulwa okanye icinywe ngokukhululekileyo.Non-ityhefu, incasa, akukho ngxolo, ukukhuselwa kokusingqongileyo kwaye akukho radiation, ilungele abafazi abakhulelweyo kunye nabantwana
Indawo eSebenzayo:100-150 square metres
Uhlobo Lwezinambuzane:Iimbovane, amalulwane, amaphela, iimpukane, iimpuku, iingcongconi, izigcawu
Indawo yemvelaphi:eGuangdong, eTshayina
Igama lemveliso:Izinambuzane ze-ultrasonic ziyala
Ubonelelo lwamandla: AC90V-240V
Ukupakisha:Ibhokisi yoMbala kwaye yenziwe ngokwezifiso
Umbala:blue, green, orenji, purple, pink and customized
Uhlobo Lokulawula Izinambuzane:i-ultrasonic pest repeller
Ubunakho bokubonelela:Iyunithi ye-20000 / Iiyunithi ngosuku ngalunye Umenzi we-ultrasonic pest reject
Iinkcukacha zokuPakisha:1/2/4/6 ipakethe kwi-ultrasonic pest yala ibhokisi yombala okanye i-OEM
* Ngokusekwe kubuchwephesha be-ultrasonic wave, ukuqhuba izitshabalalisi ezifana neengcongconi, izigcawu, iimpuku, iimpuku,amantshontsho, iimbovane, ngaphandle kwekhaya lakho, iofisi, indawo yokutyela, indawo yokugcina impahla, igaraji, njl.
* ngempumelelo kwaye ngokulula emva kweeveki ezi-3 zokusetyenziswa.
* Indawo yosetyenziso olusebenzayo ngeyunithi ukuya kuthi ga kwi-180 square metres kwigumbi ngalinye
* 100% akukho bungozi ebantwini nakwizilwanyana zasekhaya, azinavumba, zinobuhlobo nokusingqongileyo.
* Ukusetyenziswa kwamandla aphantsi, akukho siphumo kwezinye izixhobo zasekhaya.
* KULULA UKUSEBENZISA : Vele ufake iplagi kwisokethi kwaye uyeke ukuba yenze okunye.
Izinambuzane ze-ultrasonic ziyala
I-Q1, Ngaba uyifektri okanye inkampani yokurhweba?
A: Siyifektri yokwenyani, eyasekwa ngo-2003, umenzi oqeqeshiweyo kwizixhobo zekhaya ezihlakaniphile, iimveliso eziphambili ezibandakanya i-ultrasonic pest repeller, isicoci somoya wemoto, izixhobo zokunyamekela ulusu.
Q2, Ziziphi iingenelo zakho kwaye kutheni kufuneka sikukhethe?
A: (1) Amava okuvelisa azizityebi oneminyaka eli-15, asenza sazi imveliso kunye nentengiso ngcono, kwaye siyazi into oyifunayo kwaye ilungele.
(2) Njengomzi-mveliso, asize sisukele inzuzo enkulu, umda omxinwa ngokufanelekileyo ukuxhasa abasebenzi bethu kunye nabasebenzi sijolise kuko, ngoko ungaze ukhathazeke ngexabiso ELIPHEZULU onokulifumana kuthi.
(3) Amava atyebileyo kwi-OEM & ODM, into oyifunayo kwaye uyifunayo yile nto siyiyo.
(4) Isakhono esikhulu sokubonelela, iiseti ze-20000 / ngosuku, kwaye zinokunyuswa ngokwemfuno yokwenyani.
Q3, Zeziphi izatifikethi onazo?
A: Sinazo zonke izatifikethi eziyimfuneko ezifana ne-CE, RoHS, FCC, MSDS, njl njl okanye ezinye onokuzifuna ngokukodwa.
Q4, Ngaba ndingaba neesampuli zamahhala zokuvavanya?
A: Ewe, okokuqala usebenza nathi, imirhumo yekhuriya iya kuhlawulwa kwangaphambili kwaye siya kukubuyisela imali xa ufaka iodolo yakho yokuqala esesikweni.
Q5, Lithini ixesha lakho lokuhambisa?
A: Akukho ngaphantsi kwe-30% yediphozithi ekuqinisekisweni kwe-oda, kunye nentlawulo epheleleyo yemali ngaphambi kokuthunyelwa.
Ngaphambili: IAmazon ithengisa kakhulu i-ultrasonic mosquito electronic mosquito ant roach insect repellent, i-pest defender
Okulandelayo: Ulawulo lweZitshabalalisi olutsha lwe-Ultrasonic Repeller ephuculweyo yoLawulo lweZitshabalalisi yaNgaphakathi yoMbane ngoKhanya lwasebusuku lugxotha iimpuku kunye nesinambuzane.
Isixhobo Sale Izinambuzane
I-Pest Reject Plug
2021 iplastiki entsha ephathwayo yomgibe wempuku enesiphatho
Ulawulo lweZitshabalalisi olutsha lweUltrasonic Repeller ephuculweyo...
Ngo-2020 iUltr entsha yoBuchule obuNcinci obuCwangcisiweyo...
Uluhlu olutsha oluLula Sebenzisa isiXhobo sokuLawula iZitshabalalisi zeElektroni...